Avianca nandefa serivisy tsy an-kiato avy any Munich ka hatrany Bogotá
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Avianca nandefa serivisy tsy an-kiato avy any Munich ka hatrany Bogotá
Novambra 19, 2018
Amerika atsimo izao dia somary manakaiky kokoa an'i Munich. Fankalazana fotoana lehibe amin'ny fomba lehibe, nanamarihana ny fanombohana ny serivisy vaovao an'i Avianca ho an'i Bogotá ny seranam-piaramanidina Munich miaraka amina lanonana fanapahana fehy vita amin'ny nentim-paharazana. I Munich ihany no hany toerana alemanina natolotry ny mpitatitra tany Kolombia. Nanatrika ny hetsika i Hernán Rincón, ny CEO an'ny Avianca, ary ny Dr. Michael Kerkloh, ny filoha sy ny talen'ny seranam-piaramanidina Munich.
“Faly izahay fa nifidy an'i Munich i Avianca. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka voahaja ho mpitatitra entana tsara indrindra any Amerika atsimo izao dia hiakatra amin'ny seranam-piaramanidina tsara indrindra any Eropa, "hoy ny Dr. Kerkloh.
Hernán Rincón, ny CEO an'ny Avianca ary ny filohan'ny Avianca Holdings SA dia nanampy hoe: "Faly izahay manolotra ity serivisy ity ho an'ireo mpandeha ary hanitatra ny tamba-jotra amin'ny zotra. Miaraka amin'ny fanampiana an'i Munich, dia manidina any amin'ny toeran-110 any amin'ny firenena 27 izahay izao. ”
Avianca hiala ao Munich mankany amin'ny renivohitra Kolombiana indimy isan-kerinandro. Ireo mpandeha manidina any Bogotá dia handray soa amin'ny sidina mampifandray marobe mankany amin'ny toerana manintona any Amerika Latina atolotry ny mpikambana Star Alliance Avianca ao amin'ny foibeny. Miaraka amin'ireo tanàna 20 any Kolombia, ny avianca dia manidina amin'ny toeran-kafa 60 any Amerika Latina, ao anatin'izany ny maro any Mexico, Karaiba ary manerana ny kaontinanta Amerika Latina.
Avianca no kaompaniam-piaramanidina faharoany. Izy io dia hanompo ny làlambe Munich miaraka amin'ny Dreamliner maoderina, widebody Boeing 787-800.
Ny CITE 2018 dia miarahaba ny mpiara-miasa voalohany amin'ny taom-pizahan-tany EU-China
United Airlines dia manitatra ny fandaharam-potoanan'ny lohataona